China CNC Milling orinasa sy mpanamboatra | firaka
Ny CNC Milling dia manana tombony betsaka noho ny fizotry ny famokarana hafa. Mandany vola amin'ny hazakazaka fohy. Ny endrika sarotra sy ny fandeferana avo lenta dia azo atao. Famaranana malefaka azo tanterahina. Ny fikosoham-bolo amin'ny CNC dia afaka mamokatra saika ny endrika 2D na 3D raha toa ka afaka mahatratra ny fitaovana esorina ireo fitaovana fanapahana miodina. Ny ohatra momba ny faritra dia misy ny singa maotera, ny fitaovana ampiasaina amin'ny bobongolo, ny mekanika sarotra, ny vala, sns.
Computer Numeric Controlled (CNC) Milling dia famolavolana milina izay ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny solika sy gazy. Ny CNC Milling dia mampiasa fitaovana fanapahana miodina izay mitovy amin'ny fandavahana, ny maha samy hafa azy dia misy fanapahana izay mihetsika manaraka famaky hafa mamorona endrika maro izay mety ahitana lavaka sy slot. Izy io dia endrika mahazatra an'ny Machining Control Numerical Control satria manatanteraka ny asan'ny milina fandavahana sy fanodinana. Io no fomba mora indrindra hahazoana fitrandrahana marina ho an'ny karazan-kalitao rehetra mba hamokarana vokatra ho an'ny orinasanao.
Fahasamihafana eo amin'ny fihodinan'ny CNC sy ny fihodinan'ny CNC
Ny CNC Milling sy ny CNC Turning dia mamela ny mpampiasa hamorona lamina ary hanampy antsipirihany amin'ny metaly izay tsy vitan'ny tanana. Ny CNC Milling dia mampiasa baiko, kaody voarindra ao anaty solosaina ary napetraka hihazakazaka. Mandrosoa avy eo ny fikosoham-bary ary mihodina amin'ny famaky mba hanapahana ireo fitaovana amin'ny refy tafiditra ao anaty solosaina. Ny programa informatika dia mamela ny masinina hanao fanapahana mazava tsara, ny mpampiasa dia afaka manongana tanana ireo Masinina CNC hampiadana na hanafainganana ny fizotrany.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny CNC Turning dia mampiasa milina fehezin'ny solosaina hamoronana vokatra farany hafa. Ny fizotrany dia mampiasa fitaovana fanapahana teboka tokana izay mampiditra mifanandrify amin'ny fitaovana hokapaina. Ny fitaovana dia mihodina amin'ny fiovana hafainganam-pandeha ary ny fitaovana fanapahana mamakivaky dia mamorona fanapahana varingarina miaraka amin'ny refy marina. Izy io dia ampiasaina hananganana fizarana boribory na tubular avy amin'ny singa lehibe kokoa. Izy io dia dingana mandeha ho azy ary ny hafainganam-pandeha dia mety ho fanitsiana ho an'ny tena marimarina kokoa fa tsy hanodina ny lathe amin'ny tanany.
valo Okuma MA-40HA Ivotoerana famolavolana marindrano (HMC)
ivon'ny milina mitsangana efatra Vadalava (VMC) efatra
Okuman Genos M460-VE VMC iray misy rafitra fanesorana puce sy mpanova fitaovana mandeha ho azy
Endrika: araka ny takinao
Haben'ny habe: savaivony 2-1000mm
Fitaovana: Aluminium, Steel, Stainless Steel, Titanium, Brass, sns
Fandeferana: +/- 0.005mm
OEM / ODM dia raisina an-tanan-droa.
Serivisy fanampiny: Machining CNC, Mihodina ny CNC, Fametahana metaly, Sheet Metal, Vita, Fitaovana, sns
Teo aloha: Application Industries
Manaraka: Mihodina ny CNC